Pipe Accessories, Hvac, Shower Drain - Ningbo Runner
inona manolotra izahay
NAHOANA mifidiana anay
Ningbo Runner Amin'ny sehatry ny fitaovana vaovao, ny fikolokoloana maintso, ny fanamasinana ny rivotra, ny rafi-drivotra madio, ny faharanitan-tsaina sy ny sisa, miankina amin'ny andrim-pikarohana momba ny orinasa sy ny foibe famolavolana fikarohana sy fampandrosoana, WRNWRN dia manana patanty famoronana mihoatra ny 100, patanty modely azo ampiasaina, patanty fisehoana sns.
Fahendrena ho an'ny ho avy
Izahay dia nandroso ny famokarana andalana toy ny manan-tsaina koronosy, maintso fitsaboana ambonin'ny sy ny manan-tsaina fivoriana, ary tsikelikely nahatsapa ny fampidirina fampahalalana ny MES fanatanterahana rafitra fanatanterahana, rafitra PLM sy ny ERP rafitra, ary koa ny lehibe-telo-habe logistics foibe ary tena rafitra fitantanana rojom-pifandraisana mifandrindra.
Nandalo ny fanamarinana rafitra fitantanana kalitao ISO9001 izahay ary nandalo ny fenitry ny rafitra fitantanana fampidirana roa tonta ao amin'ny Ministeran'ny Indostria sy ny Teknoloolojian'ny fampahalalana.
Izahay tamin'ny alàlan'ny fifidianan-tsofina henjana ireo mpamatsy avy any ivelany sy ny fanamarinana ny asa fivarotana ao amin'ny ambaratonga anatiny, nanangana tambajotram-pividianana rafitra sy loharanom-pahalalana mpamatsy. Mampihena tsara ny vidin'ny asa sy manatsara ny fahombiazan'ny famokarana ary ny fahafahan'ny fanaterana vokatra.
Mitsangana Aluminium mitsangana Ai ...
Mitsangana Aluminium gorodona Reg ...
Wood fisoratana anarana Flushmount Fl ...
Plastika fisoratana anarana Louvered F ...
Wood fisoratana anarana Oak Floor Lou ...
Steel Baseboard miverina rivotra ...
Ningbo Runner, natsangana tamin'ny 2002, dia orinasan'ny Runner Group. Androany izahay dia mpanamboatra manambatra mampiditra fikarohana, famolavolana & famokarana, ary miorina afovoany ao Ningbo fibodoana 140.000 metatra toradroa ny sehatry ny fanamboarana sy ny trano fanatobiana entana. Miankina amin'ny fikarohana ara-teknolojia matanjaka sy ny fahaizan'ny mpamokatra haingam-pandeha, ary koa ny fifandraisana mirindra amin'ireo mpanjifanay, nanangana ny lazanay manerantany izahay. izahay dia manome vokatra marobe manarona ny fantson-drano, HVAC, indostrian'ny fitaovana ary ny vokatray dia nanarona an'i Amerika Avaratra, Eoropa, Moyen Orient ary Amerika atsimo. Amin'ny maha mpanamboatra OEM / ODM mahay, Runner dia natokana amin'ny fanavaozana ny dingam-pamokarana vaovao, mitady fomba hanatsarana ny vokatra efa misy, mamorona vaovao ho an'ny vokatra vaovao ho an'ny tsena vaovao ary hamaly